FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHORKIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chorkie
Alika mifangaro mifangaro Chihuahua / Yorkshire Terrier
Chico the Chorkie amin'ny faha-7 taonany miaraka amin'ny palitaony vita amin'ny akanjo lava— 'Ny renin'i Chico dia purebred Yorkshire Terrier ary ny dadany dia madio Chihuahua . Alika tsara izy ary mora zatra . Hainy ny mitondra tsipìka, mipetraka, mandry, mihozongozona, avo 5, miandry, mijoro, mihodinkodina ary mijanona. Manao izany anefa izy miondrika amin'izay rehetra mihetsika ivelany eo amin'ny varavarankely eo anoloana, ka ataontsika mihidy ny takona mandritra ny andro. Mampinono! Miezaka ny hampiditra azy any koa izahay hodi-kazo hivoaka any ivelany , fa ny ataony fotsiny dia mipetraka eo am-baravarana, ary antenaiko fa tsikaritray fa eo izy, raha tsy izany dia miondrika eo am-baravarana izy. '
Ny alika Chorkie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Yorkshire Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Chorkie
Mpanoratra International Canine Registry®= Chorkie (York Chi)
Ellie the Chorkie puppy amin'ny 5 volana (dadan'i Yorkie sy longhair Chihuahua reny)
Dixie the Chihuahua / Yorkie cross (Chorkie) miaraka amin'ny akanjony miakanjo lava, mipetraka eo ambony seza.
Heidi the Chorkie kely toy ny alika kely amin'ny 6 volana mitsambikina
Wren the Chorkie amin'ny faha-9 volana— 'Nandray ny Noely' Wren 'izahay tamin'ny Andron'ny Noely. Tamin'io fotoana io dia 15 grama fotsiny izy ary efa tonga tany amin'ny efitrano fitsaboana maika noho ny hatairana tafahoatra. Nandany tavoahangy tavoahangy sy famahanana syringe izahay nandritra ny telo volana mba hitondrana ny lanjany ary hanampy azy hanana fahatokisan-tena sy tanjaka. Ankehitriny dia tovovavy tanora salama sy sambatra izy, izay manazava ny efitrano na aiza na aiza alehantsika. '
'Ireo no Chorkies-ko, Pixie amin'ny taona 1, ary Gracie amin'ny 8 herinandro. Pixie no alika mamy indrindra fantatro na dia mbola tsy reny aza izy dia renim-pianakaviana lehibe. Ity alika hybrid ity dia tsara satria milalao sy be fitiavana izy ireo. Rehefa fotoana hilalaovana dia manana 'baolina' isika, fa rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra na hatoriana dia te-hihomehy akaiky ahy araka izay azony atao izy ireo. Mahafinaritra be i Gracie saingy mbola kely izy ary mandeha amin'izany alika puppy . Ny heveriko fa mahaliana ary tokony homarihina dia ny fahasamihafana amin'ny fisehoan'izy ireo. Raha liana amin'ity hybrid ity ianao dia jereo tsara fa mety tsy hahazo izay tadiavinao ianao. Pixie dia mitovy amin'ny a Yorkie . Fony mbola kely izy dia nanana volo lava volo, fa i Gracie dia mitovy amin'ny a longhair Chihuahua izay tsara amiko rehefa mitandrina Pixie voapaika toy ny a Schnauzer . Amin'ny ankapobeny ity dia hybrid lehibe, fa raha manana ianao dia tsy maintsy tompon'andraikitra ary mifanaraka amin'ny fiofanana na miala tsiny ianao . '
Gracie ny alika kely Chorkie amin'ny 8 herinandro eo an-kianja
Pixie the Chorkie amin'ny taona 1 mandry eo am-pofoan'ny tompony
Samson the Chorkie (Chihuahua / Yorkie mix karazany) alika kely amin'ny 8 herinandro
Alika kely Chorkie amin'ny 3 1/2 herinandro - Chihuahua efa lava volo ny reniny ary Yorkie ny raim-pianakaviana. Sary natolotry ny Tender Loving Puppies
Alika kely Chorkie amin'ny 3 1/2 herinandro eo am-pelatanana - Chihuahua lava volo ny reny ary Yorkie ny raim-pianakaviana. Sary natolotry ny Tender Loving Puppies
Hijery ohatra hafa momba ny Chorkie
Sary Chorkie 1
Sary Chorkie 2
Sary Chorkie 3
st bernard 4 volana